နောက်ဆုံးရသတင်းများ | The Magway Post
Submitted by journalist1 on Thu, 07/29/2021 - 05:13
Read more about မကွေးတိုင်းအနောက်ခြမ်း တောင်‌ကြော များတွင် မိုးကြီးနေသည့်အတွက် ချောင်းဘေးကျေးရွာများတွင် ရေဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရ
Submitted by admin on Mon, 06/21/2021 - 12:02
Read more about ပျဉ်းမနားရဲစခန်း အချုပ်မှ COVID-19ကူးစက်မှု စုစုပေါင်း ၃၇ဦးထိရှိလာ
Read more about သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တစ်စီး ချောက်အတွင်းကျ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသေဆုံး
Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 10:12
It has been for centuries that every country in the world has adopted the plans competitively and ardently for its development. The development plans mainly consist of transport and communications, electricity, oil and gas, economics and modern armament. Transports, therefore, becomes an important matter.
Read more about Behind the Scene of the Over-bridges Across Rivers
Submitted by admin on Mon, 12/07/2020 - 10:28
The River Irrawaddy, because her own abundant natural resources, has now to struggle hard against the cursed of those resources, both organic and inorganic, for her survival. It has been for some decades that men have exploited the river’s natural resources nearing to the point of her total destruction.
Read more about River Shingle Production And Lives In The Bosom Of Irrawaddy (2)
Submitted by admin on Mon, 12/07/2020 - 10:21
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းက မိမိတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အပြိုင်အဆိုင်အားစိုက်၍ စီမံကိန်းကြီးများစွာချ မှတ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ ရာစုနှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် အဓိကအားဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊လောင်စာဆီလုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရေး၊စီးပွားရေး၊ခေတ်မှီစစ်လက်နက်တို့တပ်ဆင်နိုင် ရေးတို့က အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်လျှက်ရှိခဲ့သည်။
Read more about မြစ်ကူးတံတားတို့၏နောက်ကွယ်
Submitted by admin on Fri, 12/04/2020 - 11:05
Read more about အမှိုက်ပုံအလုပ်သမားများအတွက်ဂရုပြုပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး
Submitted by admin on Fri, 12/04/2020 - 10:55
ဒီဇင်ဘာ ၄၊မင်းဘူး The Magway Post
မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်နေ့က ရန်ကုန်သို့ Volunteer သွားရောက်သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများထဲမှ မင်းဘူးခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ သူနာပြုတစ်ဦးတွင် Covid-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Read more about ရန်ကုန်သို့ Volunteer အဖြစ်သွားရောက်သည့် မင်းဘူးဆေးရုံမှ အပြာဝတ် သူနာပြုတစ်ဦးတွင် Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ
Read more about ဧရာဝတီရင်ခွင်ပေါ်က ကုန်စည်စီးဆင်းမှု
Read more about The River Irrawaddy And The Lost Rare Fish
Subscribe to နောက်ဆုံးရသတင်းများ